के यो बान्को सान्तान्दर वा BBVA मा हुनु राम्रो हो? | अर्थव्यवस्था वित्त
के यो बान्को सान्तान्दर वा BBVA मा हुनु राम्रो हो?
यो बैंकि sector क्षेत्र मा स्थिति खोल्न चाहने लगानीकर्ताहरु द्वारा सोधिएको क्लासिक प्रश्नहरु मध्ये एक हो र हामी डिक्फर गर्ने प्रयास गर्दैछौं। दुई दुई ठूला बैंकहरू हुन् जुन राष्ट्रिय इक्विटीहरूको छनौट सूचकांकमा सूचीबद्ध छन् र ती धेरै यस्तै स्थिरता कायम गर्दछन्। तर त्यो हालका महिनाहरूमा उनीहरूले केही भिन्नताहरूको साथ केही मार्गहरू लिएका छन्। त्यसबखत उनीहरूको शेयर बजार मा लगभग मूल्यांकन बराबर छ।
स्यान्टेन्डर र बीबीभीए बीच अर्को डिमिनेनेटर छ र त्यो हो कि ती दुवै अवस्थामा उनीहरूले आफ्ना सेयरधारकहरूलाई लाभांश तिर्छन्। चार वार्षिक भुक्तानी मार्फत लगभग%% को नाफाको साथ र जुन यी विशेषताहरूको साथ मानको मध्य स्तरमा अवस्थित छन्। लगानीकर्ताहरू जसले इक्विटीहरू भित्र निश्चित आय धितोहरूको पोर्टफोलियो निर्माण गर्न चाहन्छ र इक्विटी बजारमा जे भए पनि। धेरै वर्षहरु को लागी यसको एक पहचान हो।
अर्कोतर्फ, यी दुई बैंकहरूले समानान्तर जीवनको नेतृत्व गरेका छन् जसले लगानीकर्ताहरूलाई यसमा उनीहरूको पोर्टफोलियोमा एकीकृत गर्न कुन सुरक्षाको छनौट गर्ने भन्ने बारे धेरै शंका उत्पन्न भएको छ। जे भए पनि, ती स्पेनिश शेयर बजारमा सब भन्दा महत्वपूर्ण निलो चिपहरू हुन्। उच्च क्यापिटलाइजेशनको साथ र जहाँ हरेक दिन धेरै शीर्षकहरू एक हात बाट अर्कोमा सर्दछन्। त्यो हो, तिनीहरूसँग ठूलो तरलता छ, आईबेक्स within 35 भित्रमा सब भन्दा उच्च एक।
1 BBVA र स्यानट्यान्डर: डायभर्जेन्सहरू
2 BBVA 50% हरायो
3 दीर्घकालीन लाभदायक
4 दुबै बैंकहरूमा तुलना
5 पुनर्गठनमा लागतहरू
6 BBVA परिणामहरू
BBVA र स्यानट्यान्डर: डायभर्जेन्सहरू
मूल्यको कन्फर्मेसनमा स्थिरता स्थिर रहेको छ जुन बानको सान्तेन्डरले नियमित रूपमा देखाएको छ। हालका वर्षहरूमा यो दायरामा सारिएको छ जुन प्रति शेयर 3,50० देखिeयूरोमा जान्छ, साना र मध्यम लगानीकर्ताहरूलाई अधिक स्थिरता प्रदान गर्दछ। राष्ट्रिय इक्विटीहरू द्वारा प्रस्ताव गरिएको अन्य प्रस्तावहरूको माथि। त्यो हो, त्यहाँ कुनै ठूलो पुनर्मूल्यांकन वा मूल्यमा ठूलो घाटा भएको छैन। पछिल्ला केही हप्ताहरू अपवाद बाहेक जहाँ यो short.6० युरोको स्तरतिर बढिरहेको छ युराहरूको लगभग एक इकाई समयको छोटो अन्तरमा हराएपछि।
यस सन्दर्भमा, यो भन्न सकिन्छ कि यो बैंक मूल्य BBVA भन्दा बढी स्थिर छ। त्यस्तो समयमा जब बै banking्कि sector क्षेत्र सबैभन्दा राम्रो स्थितिमा छैन किनकि यो यूरो क्षेत्रमा कम ब्याज दरको परिणामस्वरूप ठूलो सजाय दिइन्छ, जसले यसको व्यापार परिणामलाई चोट पुर्‍याएको छ। वित्तीय विश्लेषकहरूले यो सोच्दछ कि यो 3,20..२० युरोसम्म जान सक्छ, जुन स्तरमा यो वास्तविक व्यवसायको अवसर हुनेछ। पुनर्मूल्यांकनको लागि एक सम्भावनाको साथ जुन उत्कृष्टको रूपमा वर्गीकृत गर्नुपर्दछ।
BBVA 50% हरायो
अर्को एकदम भिन्न कुरा भनेको बीबीभीएलाई के हुँदैछ र यो केही वर्ष अघि levels यूरोको स्तरमा कारोबार भएकोले यसलाई झर्ने बन्द भएको छैन। समयको यस अवधिमा, शेयर बजार मा यसको मूल्यांकन को %०% पछाडि छोडियो। 9..50० युरो मा ट्रेडिंग गरेर र यसको प्रतिस्पर्धी को नजिक। मार्जिनहरू, अवश्य पनि, संकुचित छ र यसको मतलब यो हो कि BBVA मध्यम र लामो अवधिमा बढी लाभदायक हुन सक्छ। अचम्म मान्नु पर्दैन, यो एउटा मान हो जुन आइबेक्स 4,50 35 मा खराब प्रदर्शन प्रदर्शन गर्दछ।
उसको बिरूद्धमा खेलेको अर्को पक्ष न्यायिक मुद्दा हो जसमा उनी अघिल्लो नेतृत्वलाई असर पार्ने भ्रष्टाचारका मुद्दाको नतिजामा डुबाउन सकिन्छ। र त्यो कुनै श doubt्का बिना वित्तीय बजार मा इकाई को हितहरु को विरुद्ध जान्छ। उदीयमान बजारहरूमा यसको पर्दाफास पछाडि, जस्तै मेक्सिको र टर्की, जसले लगानीकर्ताहरूबाट इच्छित परिणाम प्राप्त गरेका छैनन्। जहाँ बिक्री वर्तमान स्पष्ट रूपमा खरीददार मा थोपेको छ। यसको विशिष्ट वजनको बाबजूद यो स्पेनिश बैंकि inमा छ।
एउटा चीजमा दुबै वाणिज्य बैंकहरू सहमत छन् र त्यो यो हो कि जब बैंकि sector क्षेत्रमा समस्याहरू समाधान हुन्छन् र ब्याज दरहरू फेरि बढ्छन्, तिनीहरूले स्पेनिश इक्विटीहरूको छनौट सूचकांकको बाँकी मूल्य भन्दा राम्रो गर्न सक्छन्। तर यो हुन सक्छ कि यो नहुँदासम्म हामीले धेरै महिना वा वर्षौं पर्खनु पर्नेछ। किनकी दुई बैंकहरु को धेरै महिनाहरु को स्पष्ट रूप मा तल प्रवृत्ति मा छ र यो बाहिर प्राप्त गर्न धेरै प्रयास लिने छ। यद्यपि तिनीहरू ओभरसोल्डको स्पष्ट अवस्थामा छन् र यस दृष्टिकोणबाट तिनीहरू अबदेखि बचतलाई पुनर्मूल्या to् गर्ने व्यवसाय अवसर हुन सक्छन्।
तिनीहरू पनि आफ्नो मूल्य मा कम मूल्यांकन गरिएको छ र राम्रो चीज तिनीहरू छ पहिले नै सानो तल यात्रा छ। यस दृष्टिकोणबाट उनीहरू बेच्नको लागि किन्नको लागि अधिक छन्। उनीहरूको सञ्चालनमा जोखिमको बाबजुद विशेष गरी यो सामान्य परिप्रेक्षमा, जुन बैंकि sector क्षेत्रका लागि धेरै अनुकूल छैन। जहाँ छोटो अवधिमा तिनीहरू पतन जारी गर्न सक्छन् र केही तीव्रताका साथ, जस्तो कि यो गर्मीमा भयो। कुनै पनि केसमा, पोजिसन खोल्नको लागि सही समय कहिले हो भनेर जाँच गर्न त्यहाँ रडारमा राख्नु बाहेक अरू विकल्प थिएन। अस्थिरताको साथ जुन हालका महिनाहरूमा यसको अर्को सामान्य डिनोमिनेटरहरू भएको छ।
उच्च क्यापिटलाइजेशनको साथ र जहाँ हरेक दिन धेरै शीर्षकहरू एक हात बाट अर्कोमा सर्दछन्। भन्नुपर्दा, उनीहरूसँग ठूलो तरलता छ, आईबेक्स within 35 भित्र सब भन्दा उच्च एक हो। तर यो हुन सक्छ कि त्यसो नभएसम्म हामीले धेरै महिना वा वर्षौं पनि पर्खनु पर्दछ।
दुबै बैंकहरूमा तुलना
बान्को सान्तान्दरको सन्दर्भमा, बर्षको पहिलो छमाहीको अवधिमा ब्याज मार्जिन १,,17.636 मिलियन युरो थियो, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा%% बढी थियो, जबकि क्रेडिट र ग्राहक कोष respectively% र%% क्रमशः बढ्यो, स्थिर यूरोमा (त्यो विनिमय दरको प्रभाव बाहेक) हो। दोस्रो क्वाटरमा बैंकले ग्राहकको संख्या १० लाख बढायो र सान्तान्दरले १ 142२ मिलियन सेवा गरिसकेको छ जुन युरोप र अमेरिकाको कुनै पनि बैंकको तुलनामा बढी हो।
सबै डिजिटल सेवाहरू रणनीति ड्राइभ गर्न नयाँ सान्तेडर ग्लोबल प्लेटफार्म एकाईमा समूहीकृत गरिएको छ। सेमिस्टरमा डिजिटल अपोपेसन जारी छ र पहिले नै 34,8 XNUMX..XNUMX मिलियन ग्राहकहरू प्रयोग गरिरहेका छन् डिजिटल सेवाहरू सान्तेन्डर को। औसतमा, २240० ग्राहकहरू प्रत्येक सेकेन्डमा बैंकको मोबाइल वा डिजिटल प्लेटफर्महरूमा पहुँच गर्दछन्, जसले गत १२ महिनामा २%% ले वृद्धि प्रतिनिधित्व गर्दछ। जहाँ, qualityणको गुणस्तर लगातार सुधार भएको छ, क्वाटरमा ११ आधार बिन्दुको अपराधी दर घटाएर 28१% पुगेको छ, जबकि ofण लागत ०.12 11% मा स्थिर रहेको छ।
सीईटी १ पूंजी अनुपातको सम्बन्धमा, यो अब ११.1०% छ, एक बर्ष भन्दा basis० आधार बिन्दु, र सान्तेन्दर संसारको सबैभन्दा लाभदायक र दक्ष बैंकहरु मध्ये एक रहन्छ, साधारण मूर्तिको पूंजीमा फिर्ताको साथ। RoTE) ११.11,30% को, र efficiency 50..11,7% को दक्षता अनुपात। पहिलो त्रैमासिकमा १० 47,4 करोड खुद शुद्ध शुल्कको घोषणा भएपछि बैंकले दोस्रो त्रैमासिकमा charge करोड million million लाख रुपैयाँ नयाँ चार्ज रेकर्ड गरेको छ, खासगरी लागतका लागि स्पेन र युनाइटेड किंगडममा पुनर्संरचनाको योजना छ (626२ करोड e० लाख यूरो) र युनाइटेड किंगडममा protection करोड ur० लाख युरो भुक्तान संरक्षण बीमा (पीपीआई) को लागि अतिरिक्त प्रावधानहरू।
यी शुल्कहरूको कारण १ profit% वर्षको दोस्रो क्वाटरमा विशेषता नाफामा गिरावट आएको छ। २ 1.391 मिलियन यूरो सम्म। ती शुल्कहरू बाहेक, दोस्रो क्वाटरमा सामान्य लाभ २,० 2.097 million मिलियन यूरो थियो, जुन अघिल्लो वर्षको समान त्रैमासिक भन्दा%% बढी हो: २०११ पछि सब भन्दा उच्च त्रैमासिक साधारण नाफा, ल्याटिन अमेरिकामा कडा growthण वृद्धिले चालित भएको छ, उत्तरी अमेरिकामा पनि निरन्तर नाफा बढेको छ। युरोपमा कम लागत।
बीबीभीको सन्दर्भमा, यसले २०१ of को दोस्रो त्रैमासिकसम्म २,2.442२ मिलियन युरोको खुद नाफा प्राप्त गर्‍यो, जुन अघिल्लो वर्षको समान अवधिको तुलनामा 2..2019%% को भिन्नता प्रतिनिधित्व गर्दछ, कम्पनीले नेशनल सेकुरिटी बजार आयोगलाई रिपोर्ट गरेको अनुसार ( CNMV)। नोटमा बैंकले व्याख्या गरे कि परिणाम वित्तीय सम्पत्तिमा ठूलो गिरावटको रूपमा सर्त गरिएको छ, विशेष गरी पहिलो त्रैमासिकमा संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको र टर्कीमा ठूलो प्रावधान आवश्यकताको नतिजा।
यद्यपि बैंकका मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओनूर जेन्कले बैंकले वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा प्राप्त गरेका "उत्कृष्ट नतिजाहरु" लाई प्रकाश पारे जुन अवधिमा नाफा १,२1.278 मिलियन पुगेको थियो। वार्षिक मापनका आधारमा यस त्रैमासिक लाभ २.2,6% बढी हो जसमा बीबीभीए चिली पनि समावेश छ जुन २०१ in जुलाईमा इकाईले बेचेको थियो, यद्यपि चिलीको सहायक कम्पनीलाई ध्यान नदिएसम्म परिणाम।% बढी हुने छ। डाटामा जसले लगानीकर्ताहरूको ठूलो हिस्सालाई निराश तुल्यायो जसले राष्ट्रिय इक्विटीहरूको छनौट सूचकांक Ibex 2018 को यस मूल्यमा स्थिति अन्डु गर्न रोजेका छन।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » वित्तीय उत्पादनहरू » बोल्सा » के यो बान्को सान्तान्दर वा BBVA मा हुनु राम्रो हो?
सान्तान्दर बैंक राम्रो छ
तपाईंको बचतहरूलाई लाभदायक बनाउन वैकल्पिक लगानी कोषहरू